पोर्तुगाली शहर नजार: छिमेकी देशको यो आश्चर्यको भ्रमण गर्नुहोस् यात्रा समाचार
नासार, पोर्चुगलको रत्न
लुइस मार्टिनो | | पर्यटन गन्तव्यहरू, Getaways यूरोप, यात्रा
को बारे मा एक सय बीस किलोमीटर उत्तर मा अवस्थित लिस्बो, पोर्तुगाली शहर नाजार यो एक सानो जनसंख्या हो कि आय स्रोत को रूप मा पर्यटन को लागी माछा मार्ने गतिविधि प्रतिस्थापित छ। योसँग सुन्दर सेतो बालुवा समुद्र किनार र क्रिस्टल सफा पानी छ जो सर्फिंगका लागि उपयुक्त छ। त्यो क्षेत्रमा एट्लान्टिक तथाकथित गठन गर्दछ नासार घाटी, जसले यो समुद्री क्षेत्र यस खेलको लागि आवश्यक अशांतको साथ प्रदान गर्दछ।
पोर्तुगाली शहरले तपाईंलाई शानदार ग्यास्ट्रोनमी, सुन्दर प्राकृतिक इन्क्लेभहरू र स्मारकहरू, साथै गर्मी महिनाहरूमा हलचल र जीवन्त वातावरण प्रदान गर्दछ।
1 नासारमा के हेर्ने र गर्ने
1.1 अल्कोबा र बटाल्हा
2 नासारको ग्यास्ट्रोनोमी
3 मौसम र उत्सवहरू
4 नाजरमा कसरी पुग्ने
5 नासारको बारेमा रमाईलो तथ्यहरू
नासारमा के हेर्ने र गर्ने
पुर्तगाली शहर नाजारमा तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्ने पहिलो चीज यसको प्रभावशाली तटहरू हुन्। उही सहरी क्षेत्रमा छ Banhos को, धेरै व्यापक र खुला। यसको नजीक तपाईंले माछा मार्ने जिल्ला पाउनुहुनेछ, बार र रेस्टुरेन्टहरूले भरिएको। तर सबै भन्दा माथि, धेरै विशिष्ट यसका साँघुरो र ठाडो सडकहरू र यसको सेतो धुने घरहरू सहित।
शहरको माथिल्लो भागलाई सिटियो भनिन्छ र यो हो Suberco को दृष्टिकोण, करिब एक सय दश मिटर अग्लो र यसले तपाईंलाई पोर्तुगाली तटको अद्भुत दृश्य प्रस्ताव गर्दछ। तपाईं ईम्पोजिing पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साओ मिगुएल अर्कानजोको फोर्ट, यसको विशेषता लाइटहाउसको साथ।
ठीक साइट मा छ नजारको हाम्रो महिलाको अभयारण्य, एक १ XNUMX औं शताब्दीको बारको चर्च जुन लगभग जति महत्त्वपूर्ण छ फातिमा को। भित्र, तपाईं VIII बाट डेट वी भ्यान क्लोट द्वारा लिखित उही नामको भर्जिनको नक्काशी र केही सुन्दर टाइल चित्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अन्य दुई भवनहरूले यो वास्तुकला परिसर पूरा गर्छन्: शाही दरबार, जहाँ पोर्तगाली सम्राटहरू बसे, र अस्पताल।
यो सेटको नजिक, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ एथ्नोग्राफिक र पुरातात्विक संग्रहालय डॉक्टर जोआकिम मानसोबीसौं शताब्दीको शुरुदेखि नै गर्मी घरमा अवस्थित छ। यसले एक विषम प्रदर्शनी प्रस्तुत गर्दछ जुन मूर्तिकला, चित्रकला वा पुरातात्विक जोड्दछ। तर विशेष चासोको नाजेर र यसका बासिन्दाहरूको अतीतमा यसको एथनोग्राफिक खण्ड छ।
नाजारा आफ्नो दृष्टिकोणको लागि प्रसिद्ध छ
अल्कोबा र बटाल्हा
नजारको एकदम नजीक, क्रमशः १ and र kilometers० किलोमिटर, तपाईंले दुईवटा समान ठाउँहरू भेट्टाउनुहुनेछ समान ऐतिहासिक र स्मारक चासोको। यी क्षेत्रहरु हुन् अल्कोबा र बटाल्हा.
पहिले तपाईं देख्नुहुनेछ सान्ता मारिया डे अल्कोबियाको मठ११ King1148 मा राजा अल्फोन्सो I द्वारा स्थापित सिस्टेरियन मठ हो जुन युनेस्कोका अनुसार विश्व सम्पदा स्थल हो। यसको वास्तु शैली गोथिक हो यद्यपि यसमा मूरिश तत्वहरू छन्। यसमा अर्को सम्राट, पोर्चुगलको पेद्रो प्रथम र उनका प्रेमी ईनस डे क्यास्ट्रोको चिहानहरू छन्। उनको दुःखलाग्दो प्रेम कथा लुजेस भालेज डे गुएवरा वा अलेजान्ड्रो केसना जस्ता नाटककार नाटककारहरूले थियेटरमा लैजाँदा एउटा कथा हुनेछ। साथै यो भिलामा, एक धेरै फरक चरित्रको भए पनि, तपाईंसँग राष्ट्रीय वाइन संग्रहालय, पोर्तुगल मा सबै भन्दा पूर्ण एक।
को लागी बाटलाहायसको एउटा प्रभावशाली मठ पनि छ, सान मारिया दा भिट्टोरियाको, यो मनुएलिन गोथिक शैलीको उत्कृष्ट उदाहरण र विश्व सम्पदा साइट पनि हो। तर यो क्षेत्रले तपाईंलाई प्राकृतिक चमत्कारहरू पनि प्रदान गर्दछ जस्तै ग्रुटस दा मोदा, केही शानदार गुफाहरू meters 45 मिटर गहिरो र लगभग आधा किलोमिटरको विस्तारको साथ।
माछा मार्ने गाउँको रूपमा, नासारले तपाईंलाई भव्य समुद्री खाना प्रदान गर्दछ। तपाईंको कुनै पनि ताजा माछाकेवल ग्रिलमा वा ग्रिलमा पकाइन्छ, यो एक वास्तविक व्यंजन हो। र समान समुद्री खानाको बारेमा पनि भन्न सकिन्छ। तर पोर्तुगाली शहरले तपाईंलाई ठेठो भाँडा पनि दिन्छ।
यद्यपि प्राय: सबै समुद्री खानामा आधारित छन्। यो कुरा पनि हो Caldeirada, विभिन्न माछाको साथ बनेको एक स्ट्यु; को खैरो भात (स्नफ); को मासा डे पिक्सि र açordaदुई प्रकारका समुद्री खाना सूप वा cataplanas वा समुद्री खाना casseroles। मिठाइको लागि, तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ मीठो सार्डिनहरू, तामार र नाजारेनेस.
मौसम र उत्सवहरू
पोर्तुगाली शहर नाजारमा छ भूमध्य जलवायु, सबै वर्ष हल्का तापक्रम संग। तर तपाईको भ्रमणको लागि उत्तम समय यो हो जुन मे देखि अक्टुबरमा जान्छ। यस अवधिमा तापक्रम एकदमै रमाइलो हुन्छ, २ 27 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढि र त्यहाँ थोरै वर्षा हुन्छ। त्यो हो, तपाईं समुद्री किनारमा रमाउन सक्नुहुन्छ।
पोर्तुगाली शहरमा सेट मितिहरूको सन्दर्भमा, सेप्टेम्बर on देखि बाहिर खडा हुन्छ। त्यो दिन मनाइन्छ हाम्रो महिला ले नासारको भोज र हजारौं व्यक्ति तीर्थयात्रामा लाग्छन्। यो स्मारक धेरै सांस्कृतिक र गैस्ट्रोनोमिक उत्सवहरू जुन १० दिनसम्म रहन्छ।
नाजरमा कसरी पुग्ने
यदि तपाईं आफ्नो कार नासारमा जान प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ आधारको रूपमा लिनुहुन्छ भने लिस्बो, जुन तपाईं विमानमा जान सक्नुहुनेछ, त्यहाँ छ सय किलोमिटर भन्दा थोरै तपाईंको गन्तव्यमा।
तपाईं पोर्तुगाली रेलवेहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुन एकदम राम्रो छ। देशको राजधानीबाट, ट्रेन hours घण्टा २० मिनेट नासारमा लिन्छ र त्यहाँ connections3जडानहरू छन् जुन हरेक बिहान .20..38 मा सुरु हुन्छ र दिउँसो 5.37 at मा समाप्त हुन्छ।
यद्यपि, तपाई बस यात्रा लिन अधिक रुचि राख्नु हुन्छ। यो मात्र takes 35 मिनेट लिन्छ र सस्तो छ। त्यस्तै गरी, त्यहाँ connections 38 जडानहरू छन्, पहिलो प्रस्थान बिहान 8 मा। अन्तिम दिउँसो २० बजे छ।
नासारको बारेमा रमाईलो तथ्यहरू
नाजरमा तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्ने पहिलो चीज भनेको यो हो विचित्र आकर्षण। एउटा पर्यटक शहर भए पनि, विदेशीहरू यसका बासिन्दाहरूसँग मिल्दछन्, जसले पोर्तुगाली माछा मार्ने गाउँमा परम्परागत पोशाक लगाउँछन्।
तर शायद पोर्तुगाली शहरको बारेमा सब भन्दा चाखलाग्दो तथ्य यो हो कि यसको तटवर्ती क्षेत्रहरू त्यहाँ छन् संसारमा सबैभन्दा ठूलो छालहरू। वास्तवमा, तिनीहरू कहिलेकाँही 10-तली भवनको आकारमा पुग्छन्। त्यसकारण उनीहरू बोल्छन् Naz नासारको ठूलो लहर ».
अन्तमा, हामी तपाईंलाई बताउँछौं दन्त्यकथा पोर्चुगाली शहर नासारको जग बसालिएको छ। शिकार गर्दै र मृगको खोजी गर्दा, महान डन फूआस राउपीन्होले आफ्नो घोडा सीधा चट्टानतिर लागिरहेको देखे। अपरिहार्य अवस्थाको सामना गर्नुपर्दा उनले आफूलाई भर्जिनमा सुम्पिदिए र उनी उसको अघि देखा पर्दै घोडालाई आफ्नो ट्र्याकमा रोकिदिए। धन्यबादको रूपमा, राउपिनहोले बोलावट भएको ठाउँमा चैपल बनाए मेमोरी को। यसको वरिपरि, माछा मार्ने गाउँ जुन आज नासार विकसित भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » नासार, पोर्चुगलको रत्न
माराकेचको लागि यात्रा